Ngwakọta Tstar-Carbon fiber na fiberglass ngwaahịa
Carbon Fiber Mkpanaka
Mpempe akwụkwọ carbon fiber
Profaịlụ Fiber Carbon
Faiba glaasi mkpanaka
Faiba glaasi mpempe akwụkwọ
Faiba glaasi Profaịlụ
anyị na-emepụta ụdị ngwaahịa FRP niile
Carbon fiber na fiberglass
Na-eme ka ụwa dị ọkụ ma sie ike
Enwere ike ịhazi ọdịdị na ọdịdị ọ bụla
Carbon eriri mkpanaka
Carbon fiber mpempe akwụkwọ
profaịlụ nke carbon fiber
mpempe akwụkwọ fiberglass
Ihe kpatara ịhọrọ Tstar
Ọpụrụiche na ụlọ ọrụ frp maka ihe karịrị 20 afọ
Anyị bụ ndị ọkachamara carbon eriri na iko eriri ngwaahịa factory, Anyị isi ngwaahịa na-agụnye carbon eriri tube, carbon eriri mkpara, carbon eriri ịkpụzi ngwaahịa, fiberglass mkpanaka, fiberglass tube, fiberglass mpempe akwụkwọ, fiberglass profaịlụ wdg.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Tstar Composites Co., Ltd.
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe na kites, ụgbọ mmiri, nche anwụ, ụlọ ntu, akpa gọlfụ, sistemu ngere, stakes nursery, transformers, tool handle, antenna and enclosures, ladder rails, brushes, toys, pet products as well as for tripods, flags poles , okporo osisi ski, insulators, gratings, composite rock bolts, fiberglass/carbon rebars, wdg.
5 ụdị nke mmepụta usoro
Nrụpụta dị elu
Ogologo na-akparaghị ókè
Ezigbo ike ike
Ike ịkwa akwa dị mma
Ọdịdị dị iche iche (1k, 3k, UD wdg ..)
Enweghị ego ebu
Enwere ike ịhazi ya n'ụdị dị iche iche na cnc
Ụlọ ọrụ Square Mita
Tọn kwa afọ mmepụta
Mba na-ebupụ mba ọzọ
Nhọrọ dị mma iji dochie bamboo ma ọ bụ osisi , nke nwere uru ise:
1. Ọmarịcha arụmọrụ na nguzogide UV na nguzogide kemịkalụ
2. Ga-alanarị oge na-eto eto karịa osisi bamboo na osisi osisi
3. Dị fechaa ma sie ike, agaghị agba nchara
4. Ọ dị mfe ịwụnye na njedebe tapered. Ọ dị mfe ịkpụ ogologo ọ bụla ịchọrọ
5. Ogologo ndụ ogologo ndụ. Ọzụzụ kacha mma, sk ubi, sk ọta ahịhịa na osisi vine, osisi tomato
Olive owuwe ihe ubi na-akpụ osisi carbon fiber
A na-eji ya eme ihe na usoro ọsọ ọsọ na-achọ ịdị arọ na ike dị elu
1. Ike dị elu (7-9 ugboro ígwè)
2. Obere nha (1/4 nke ígwè)
3. Mma mma thermal ujo eguzogide
4. Ọnụ ọgụgụ mgbasawanye ọkụ dị ala (obere nrụrụ)
5. Obere okpomọkụ ike (ịchekwa ike)
6. Ezi okpomọkụ na-eguzogide (nwere ike anabata elu okpomọkụ n'elu 200 ℃)
7. Ọmarịcha mgbochi corrosion na radieshon arụmọrụ
Carbon fiber mpempe akwụkwọ maka nri ngwa ngwa njem drone
Fiberglass stake nwere eserese aja siri ike
Ogwe ụlọikwuu fiberglass
Mkpanaka eriri fiberglass maka eriri eriri waya
Ogwe osisi griin haus fiberglass
Mpempe akwụkwọ mgbochi fiberglass kacha mma 2020
Akụkọ na akụkọ ọhụrụ
Gịnị bụ Njirimara nke carbon fiber composites akụkụ
April 25, 2022 Enweghị asịsa
Kedu ihe bụ njirimara nke carbon fiber composites akụkụ 1. Ụdị modul na ihe na-agbanwe agbanwe dị elu. Enwere ọtụtụ ụdị ihe mejupụtara eriri carbon. Ndị a na-ahụkarị bụ T300 na T700. The tensile ike nke T300 nwere ike iru 3500MPa, na njupụta nke ihe bụ naanị 1.6g / cm3 , Ọ nwere ike ịhụ otú a, ya.
Ngwa nke epoxy FR4 efere
September 24, 2021 Enweghị asịsa
Epoxy FR4 plate FR4 board definition: emere ya na akwa eletrọnịkị ọkwa glazed nke etinyere ya na agba bismaleimide resin emezigharịrị, akpọnwụọ ma tinye ya ọkụ. Standardkpụrụ Executive: Q/TXXFR003-2010 Okpomọkụ na-eguzogide ọkwa: H ọkwa Agba: eke agba (agba aja aja) Njirimara: O nwere nnukwu ígwè ọrụ na dielectric Njirimara, okpomọkụ na-eguzogide na radieshon iguzogide. Ogologo oge na-arụ ọrụ okpomọkụ ≥180 ℃.eji: N'ihi na n'ibu na eletriki ojiji, adabara
Kedu uru dị na bọọdụ epoxy G10?
September 23, 2021 Enweghị asịsa
A na-ejikarị bọọdụ epoxy G10 dị ka ihe mkpuchi ihe n'ime moto na akụrụngwa eletriki, dị ka ndị na-agbaji sekit, igbe mgba ọkụ, ihe ngbanwe, moto DC, ndị na-ahụ maka AC, ngwa eletrik na-agbawa agbawa na ngwa eletrik ndị ọzọ. A na-ejikarị ya eme ihe, ebe 3240 bụ bọọdụ ọdịnala ochie. G10 bụ bọọdụ a na-ejikarị na Europe na America. N'ihi na akụrụngwa resin
Ịrụ ọrụ mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi na okpomọkụ dị iche iche
September 13, 2021 Enweghị asịsa
bọọdụ mkpuchi mkpuchi bụ ihe mkpuchi a na-ejikarị. N'ihi ezigbo ihe mkpuchi ya, ejirila ya mee ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Otú ọ dị, anyị ga-achọpụta na ihe mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi anyị ga-emetụta àgwà nke ihe dị iche iche, na mkpuchi nke mkpuchi mkpuchi ga-emetụtakwa okpomọkụ dị iche iche. Gịnị bụ mkpuchi
Isi ụlọ ọrụ Shenzhen Tinye:
Ụlọ Yongfu, baoan, shenzhen, Guangdong, PRChina
Ụlọ ọrụ Dongguan Tinye:
Ụlọ ọrụ Huizhou Tinye:
Hazie Site na Usoro
Tstar Composites© Ikike niile echekwabara 2021
Daalụ maka ịkpọtụrụ anyị! Anyị ga-akpọtụrụ gị n'oge na-adịghị anya.
Ezigbo, kedu ihe m ga-enyere gị aka
Whatsapp Skype envelopu